Cala Xarraca, zoro mahafinaritra ao Ibiza | Vaovao momba ny dia
Mariela Carril | | Ibiza, tora-pasika
Ibiza Izy io dia iray amin'ireo Nosy Balearic fantatra amin'ny maha iray amin'ireo toerana fizahan-tany mahafinaritra any Eropa rehefa mitady masoandro, morontsiraka, gastronomie ary fety be. Manana 572 kilometatra toradroa izy ary amin'ny zoron'ny morontsiraka avaratra dia ny Cala Xarraca.
Xarraca dia iray amin'ireo coves maro ananan'i Ibiza ary anio isika hiresaka momba izany. Ahoana ny fieritreretana an'i Ibiza amin'ny fahavaratra manaraka?
Ibiza sy ny ondriny
210 metatra ny halaviran'i Ibiza, lehibe ny toetrandro ary miovaova ny jeografia misy azy. Tamin'ny faran'ny taona 60, ny fiandohan'ny taona 70 dia nanomboka tonga tamim-pahavitrihana ny fizahan-tany ary niaraka tamin'izay ny nosy dia nanomboka fampandrosoana lehibe kokoa, mihoatra ny hetsika ara-toekarena nentim-paharazana toy ny fambolena sy ny jono.
I Ibiza dia misy torapasika sy zorony. Antsoy ny Espaniola fa "zaridaina" manokana ireo tsofina kely. Fa amin'ny ankapobeny ny cove dia cove, fidirana rano amin'ny faritany boribory na faribolana farafaharatsiny, misy vava tery. Mieritrereta bay iray somary mihidy sy somary mihidy. Kodiarana izany, ary any Ibiza dia misy maro.
Iray amin'ireo lava-bato tsara tarehy ireo dia ny Cala Xarraca. Dimy kilometatra miala an'i San Juan, avaratry ny nosy izy io. Voahodidin'ny vato izy ary manana halavana 70 kilometatra sy 20 metatra ny sakany. Amoron-dranomasina manokana izy io satria manana tsy fitoviana lehibe ka tokony hitandrina ianao rehefa miditra anaty rano. Inona koa, misy posidonia be dia be, betsaka, ka aleon'ny sasany mitsidika azy io.
Inona ny Posidonia? ny zavamaniry anaty rano izay endemika amin'ny Ranomasina Mediterane. Manana faka, fotony sy ravina izy, mamony amin'ny fararano ary mamoa, rehefa misaraka dia milomano ao anaty rano ary toy ny "oliva an-dranomasina".
Cala Xarraca dia 21 kilometatra miala ny tanànan'ny Ibiza ary ny 5 an'i Sant Joan, San Juan ihany, eo anelanelan'ny tendron'ny Xarraca sy ny Torre. Sarotra ny mandeha any amin'ny zavatra hafa ankoatry ny fiaraBetsaka ny tehezan-tendrombohitra, noho izany dia mila mampiasa ny lalana mampifandray an'i Ibiza amin'ny Portinatx, ny C-733 ianao, ary manaraka ny fambara amin'ireo zoro kely. Amin'ny kilometatra 17 dia miorim-paka tsara ny lalana mihodina mifanitsy aminy.
Tonga eto ny cove dia manana morontsiraka telo, roa somary kely ary ny lehibe indrindra manodidina ny 70 metatra ny halavany amin'ny 20 ny sakany, araka ny efa nolazainay etsy ambony. Ny bay dia miditra amin'ny morontsiraka voalohany izay manoloana ny trano fisakafoanana Cala Xarranca. Amin'ny vanim-potoana lehibe dia mety ho somary feno olona ity, saingy eto no ahafahanao manofa sunbeds sy elo.
La fasika, somary matevina ny fasika, miaraka amin'ny vatolampy kely ary koa, araka ny efa nolazainay, miaraka amin'ny posidonia be dia be, saingy mazava ny rano. Manodidina izany dia misy hantsam-bato, manaloka ireo fidirana rano kely, tototry ny hazo kesika sy tranobe sasany. Eo ankavanan'ny fidirana dia misy làlana iray izay mitondra anao any amin'ny faritra mitokana indrindra amin'ny lava-bato satria any no misy posidonia bebe kokoa. Angamba olona manao nudism na mandro amin'ny fotaka.
Eo alohan'ity zoro ity dia misy nosy kely. Eo anelanelan'ny morontsiraka sy ny nosy, azonao aleha milomano, ny rano dia mety amin'ny snorkeling na antsitrika satria madio ny rano. Ho fanampin'izany, ny marina indrindra, ny fisian'ny posidonia be dia be no mahatonga ireo rano ireo hanana biby an-dranomasina marobe satria ireo zavamaniry dia manana ekôstôlista manan-karena manokana ho an'ny fiainana ny karazan'olona rehetra hampivelatra.
Etsy ankilany, ny miankavanana amin'ny fidirana mankamin'ny lava-bato dia ny tranon'ny mpanjono na ny docka maina. Kely ny fasika, saika tsy misy ary misy simenitra. Eny iray beton pad avy any amin'ny faran'ny dia mitsambikina ao anaty rano ireo mpitsangatsangana nanararaotra ny haavony roa na telo metatra sy ny tady izay nahantona hiakarana indray.
Tsarovy fa ny morontsiraka, tsy toy ny fenitra, torapasika ary lava-drano maro any Ibiza, izay rehefa mihena kely ny rano dia somary fisaka izy ireo, manana tsy fitoviana lehibe io metatra vitsivitsy monja miala ny morontsiraka. Ny vato misaraka avy any ambany sy ny zavamaniry dia tsy mampaninona azy ny manatona sambo, ka raha tonga amin'ny sambo ianao dia tsara indrindra ny miantsona ao amin'ny Illot de sa Mesquida, eo akaiky eo, miaraka amina fasika, vatobe ary ahidrano ary farafahakeliny enina metatra ny halaliny.
Ka, fintino kely: ny moron-dranomasina dia dimy minitra miala an'i San Juan. Amin'ny alàlan'ny fiara ihany no ahatongavanao ary tsara ny mandeha mialoha satria kely ny toerana ipetrahana. Afaka mandeha miaraka amin'ny ankizy ianao. Mazava ny rano ary afaka snorkel ianao. Ny lounger masoandro sy elo dia nohofaina ary afaka mandro amin'ny fotaka koa ianao amin'ny ilany havia amin'ny cove. Clay dia voalaza fa manana fanasitranana.
Afaka mitondra ny sakafonao manokana ianao fa raha tsy te hitondra zavatra Misy trano fisakafoanana izay nandritra ny 30 taona dia tantanan'ny fianakaviana iray ihany, ny Tur. Misokatra isan'andro ny trano fisakafoanana amin'ny fahavaratra manomboka amin'ny 9 ora ka hatramin'ny 11:30 alina, fa mikatona eo anelanelan'ny Oktobra sy ny Paka. Toerana mahafinaritra izy io, mangina, misy fahitana tsara amin'ny ranomasina, ny hantsam-bato sy ny ala kesika ary ny menio mediteraneanina be.
Afaka manafatra paella trondro ianao, miaraka foana trondro vaovao, salady na lovia hena sy tsindrin-tsakafo, ny mahazatra ny nosy, ny greixonera (pudding amin'ny kanelina, voasarimakirana ary ensaimada). Ho fanampin'izay, raha tonga aloha ianao nefa tsy manana sakafo maraina dia azonao atao eto ny mankafy kafe misy toast. Ary farany, na dia tsy misy hotely aza ny cove, afaka mijanona eo akaikin'ny hotely na trano any Portinatx na San Juan ianao.
Fampahalalana farany: raha tianao ny mandeha an-tongotra ary tianao ny mandeha misy làlan-kaleha 12, 77 kilometatra izay mampifandray an'i San Juan sy Cala Xarraca. Ny tapany voalohany dia miampita ny tendrombohitra sy ala, mamaky ny Font des Avencs, ary tonga any amin'ny Bay of Xarraca, izay misy ilay lava-bolantsika mahafinaritra. Rehefa miverina ianao dia tsy maintsy miakatra fa manambatra faritra maloto amin'ny faritra asfalta. Ary eny, ny fahitana ny morontsiraka dia mendrika ho hita sy tsy ho faty amin'ny sary.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Tanànan'ny Espana » Ibiza » Cala Xarraca, zorony mahafinaritra any Ibiza